Blogs » Nepali News, social, entertainment &asite representing Nepal to the world !
Login Register Login	Register	Home	Blogs	Members	Photos	Music	Pages	Groups	Videos	Home	Blogs	Members	Photos	Music	Pages	Groups	Videos	Menu
Categories	Business Education Entertainment Family & Home Health Miscellaneous News Personal Blogs Politics Recreation Shopping Society Sports Technology Blogs
All Time	This Month	This Week	Today	फलामको रडनै प्रयोग गरेर सार्वजनिक याताया
घटना शनिबार बिहान भएको भए पनि सञ्चारको अभावमा राति अबेर मात्र घटनाको बारेमा जानकारी पाएको प्रहरीले जनाएको छ । सेक्सका लागि कटरिना उत्तम, तन्नेरीले मन पा
शीर्षक पढ्दैमा अचम्ममा पर्नुभयो होला हैन ? नपर्नुपनि किन । बलिउडकी एक शालिन अभिनेत्रीको विषयमा सेक्स सँग जोडिएको यस्तो शीर्षक सुन्दैमा अपाच्य लाग्नसक्छ । तर अपाच्य लागेर के गर्नु आखिर सत्य यहीँ नै हो ।
हालैको एक र्सर्वेक्षणले बलिउड अभिनेत्री कटरिना कैफसँग सबैभन्दा धेरै मानिसले सेक्स गर्ने चाहना राखेको तथ्य खुलासा गरेको छ । कण्डम बेच्ने एक कम्पनीले गरेको र्सर्वेक्षणले यस्तो नतिजा निकालेको हो । बलिउडका अरु अभिनेत्रीलाई पछाडि पार्दै कटरिना धेरै पुरुषहरुको मनमा बस्न सफल भएकी रहिछन् र बढि भन्दा बढि तन्नेरीहरु उनीसँग सम्भोग गरेको कल्पनामा रमाउँदा रहेछन् ।
र्सर्वेक्षण अनुसार कटरिना पछि दोश्रो स्थानमा एक छोरीकी आमा समेत बनिसकेकी ऐश्वर्या राय परेकी छिन् । आमा बनिसकेकी ऐश्वर्यासँग समेत धेरै पुरुषले सम्भोगको सपना देख्नु सायद उनको सुन्दरताको चमत्कार नै हो भन्नर्ुपर्छ ।
ऐश्वर्यालाई पछ्याउँदै बिपासा बसु तेश्रो पोजिसनमा छिन् । अचम्मको कुरा त के भने बलिउडका एक से एक हिरोइनहरुलाई पछार्दै टेनिस सुन्दरी सानिया मिर्जा चौथो स्थानमा रहेकी छिन् । विवाहित मिर्जासँग पनि धेरै तन्नेरीले सेक्सको दिवास्वप्न देख्ने गरेका रहेछन् । र्सर्वेक्षणले दीपिका पादुकोण तन्नेरीहरुको पाँचौ रोजाइमा रहेको देखाएको छ ।
यस्तै छैटौँ नम्बरमा सोनम कपूर, सातौँमा राखी सावन्त तथा आठौँ स्थानमा ओलम्पिकमा कास्य विजेता खेलाडि सायना नेहवाल रहेका छन् ।
कण्डम उत्पादक कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बिक्रि गर्ने सिलसिलामा उपभोक्ताहरुलाई एउटा प्रश्न सोधेको थियो ‘यदि तपाइँलाई मनले चिताएको मौका मिल्यो भने तपाइँले को सँग सेक्स गर्न चाहनुहुन्छ -’ यो र्सर्वेक्षणमा पुरुषहरुले अधिकतम सहभागिता जनाए । जसबाट धेरै भोट कटरिनाको पक्षमा पर्यो । ऐश्वर्यालाई दोश्रो स्थानमा राख्दै कण्डम उपभोक्ताहरुले यो प्रमाणित गरिदिए की आमा बनिसकेपछि पनि उनको सेक्स अपिलमा कमी आएको छैन ।
तर दुखको कुरा त के भने सानिया मिर्जा तथा सायना नेहवाल तन्नेरीको रोजाइमा पर्दा न त नम्बर एक हिरोइन करीना कपूर सेक्सी ठहरिइन् न त प्रियंका चोपडाले तन्नेरीको मनमा राज गर्न सकिन् । बच्चालाई यी ५ खाना खुवाउँदा होस पूराउनुहो
बच्चाले खानेकुरा खान खासै मन गर्दैनन्, फकाइफुलाई खुवाउनर्ुपर्छ । त्यसैले कुनै खानेकुरा मन लगाएर खायो भने अघाउन्जी खान दिइन्छ ।
तर बच्चाले मीठो मान्यो भन्दैमा जे पायो त्यहीँ खानेकुरा खान दिनु घातक हुन्छ । अझ हामीले राम्रो ठानेका वा ठूलो मान्छेलाई निकै फाइदा गर्ने खानेकुराहरु पनि सानो बच्चाका लागि हानिकारक हुनसक्छन् ।
यहाँ हामीले त्यस्ता ५ प्रकारका खानेकुराबारे उल्लेख गरेका छौँ जो शिशुका लागि खासै फाइदाजनक हुँदैनन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर साँचो कुरा के हो भने हामीले निकै हितकारी मानेका यी खानेकुरा हरु सानो बच्चाका लागि हानिकारक नै हुन्छन् ।
१. मह : महलाई औषधिको रुपमा पनि बच्चालाई खुवाउने चलन छ । दुधमा टन्न मह मिसाएर बच्चालाई खान दिइन्छ पनि । तर शिशुलाई धेरै मह खुवाउनु हानिकारक हुन्छ । शिशुको पाचन प्रणाली पूरै विकशित नभैसकेको हुने हुनाले मह पचाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले बढि मह खुवाउँदा बच्चालाई अपच हुने लगायतका समस्या देखापर्न सक्छन् ।
२. गाइको दुध : गाइको दुध पनि शिशुलाई खासै लाभदायी मानिँदैन । गाइको दुधमा अत्यधिक प्रोटिन हुने भएकाले त्यो शिशुको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । एकातर्फशिशुलाई गाइको दुध पचाउन गाह्रो हुन्छ भने अर्कोतर्फयसले बच्चाको मृगौला खराब गर्ने खतरा समेत हुन्छ ।
३. अमिलो फलफूल : कागती, सुन्तला जस्ता अमिलो फलफूल आफैमा स्वस्थ तथा लाभदायी फल हुन् । तर शिशुको लागि भने यस्ता अमिलो फलफूल हानिकारक मानिन्छन् । कागतीको रसले शिशुमा एलर्जी गराउने तथा बच्चाको पेट समेत खराब गराउने खतरा हुन्छ ।
४. बदाम : अत्यधिक प्रोटिन हुने भएकाले बदाम बच्चाका लागि उतिसारो स्वस्थ मानिँदैन । साथै बदामले बच्चामा एलर्जी समेत गराउने सम्भावना हुन्छ ।
५. अण्डाको सेतो भाग : बच्चाको लागि अण्डाको सेतो भाग पचाउन गाह्रो हुन्छ । यसले एलर्जी गराउने सम्भावना पनि बढि हुन्छ । त्यसैले सेतो भाग निकालेर बच्चालाई अण्डाको पहेँलो भाग मात्र खुवाउनु उत्तम हुन्छ । पूर्वराजा ५ लाख तिरेर फिस्टेल लजमा बस्दै
समुन्द्र पौडेल/मनोज अधिकारी, तनहुँ/पोखरा, असोज ४- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह साता लामो धार्मिक भ्रमणका लागि पोखरा आइपुगेका छन्। पृथ्वीराजमार्ग हुँदै निजी मोटरमा आएका उनी बैदामस्थित फेवाताल पारीको फिस्टेल लजमा बसेका छन्। उनी आउँदा सयौं पोखरेलीले झरीको वास्ता नगरी सडकमा लामबद्व भएर स्वागत गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरुले पूर्वराजाको पक्षमा नाराबाजीसमेत गरे। दिनभरको टन्टलापूर घाम ज्ञानेन्द्र आइपुग्ने बेला मुसलधारे वर्षामा परिणत भइसकेको थियो। शाहले आफ्नो प्रतिक्षामा घन्टौंदेखि मुस्ताङ चोकमा कुरेर बसेका नगरबासीलाई गाडीबाट ओर्लेर पैदल यात्रामै साथ दिए। उनले करिब एक किलोमिटर दूरीको फिस्टेल लजसम्म झण्डै एक घण्टा हिँडेरै यात्रा तय गरे। ज्ञानेन्द्र फेवातालमा फेरि चढेर उनी फिस्टेल लज पुगेपछि उनका समर्थकहरु फर्किएका थिए।
सुमनबाबु भण्डारीको फेसबुकबाट लिइएएको भिडियो हेर्नुस् : बाह्र वर्षमै सेक्स | मुटु साट्नेहरूको भीड
बस्नेत कमल- सेक्स! कुनै समय थियो, जति बेला सेक्सबारे समाज पटक्कै खुल्दैन थियो। कोही लजाउँथे, कोही डराउँथे। कसैलाई परम्परा र संस्कृतिले बोल्न छुट दिँदैनथ्यो। तर, अहिले समय फेरिएको छ। परिवर्तित समयसँगै सेक्सका मामिलामा समाज खुल्न थालेको छ। परम्परा फेरिँदै छन्। सेक्सका विषयमा समाज पनि उदार बन्दै गएको छ।
सुवास सापकोटा (नाम परिवर्तन) लाई नै लिऊँ न। उनकै शब्दमा सेक्सका माहिर खेलाडी हुन् उनी। 'हन्टर', उनको समूहमा यस्ता खेलाडीलाई सम्बोधन गरिने शब्द हो। सेक्सका विभिन्न आसनको अनुभव बटुलिसकेका उनका लागि ग्रुप, ओरल सेक्स सामान्य बन्दै गएका छन्। राजधानीको एक प्रतिष्ठित कलेजमा प्लस टूमा अध्ययनरत उनी काठमाडौँमा होस्टेलमा बस्छन्। गत साता नयाँ बानेश्वरस्थित बिटुबी ह्याप्पी लाइफ सेन्टरमा भेटिएका उनी त्यहाँ यौन शक्तिबर्धक औषधि खरिद गर्दै थिए। 'मानिसको जीवनमा सेक्स गाँस-बास-कपासजस्तै अत्यावश्यक छ।' स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको देशव्यापी सर्वेक्षण अनुसार औसतमा साढे १७ वर्षको उमेरमा किशोरकिशोरीले पहिलो पटक यौन सम्पर्क गर्छन्। केही समयअघि परिवार नियोजन संघले गरेको एक सर्वेक्षणमा डोटी जिल्लामा १२ वर्षको उमेरमा किशोरकिशोरीले पहिलो पटक यौन सम्बन्ध कायम गरेको देखिएको थियो। सरकारले गत वर्ष सर्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ९५ हजार जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए। एक तथ्यांकले नेपालका किशोर किशारीमध्ये ६४ प्रतिशतले १७ वर्ष पुग्नु अगावै यौन सम्पर्क राख्ने गरेको देखाएको छ। यति ठूलो संख्यामा यौन क्रियाकपालमा संलग्न जनसंख्यामा गरिएको सर्वेक्षणमा तीमध्ये १५ प्रतिशतले मात्रै आफ्नो पहिलो यौन सम्पर्कमा कन्डमको प्रयोग गरेको बताएका थिए।
मुटु साट्नेहरूको भीड
मदन चौधरी- तराईको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने वीरगञ्जको तापक्रम यतिबेला ३५ डिग्री छ। गर्मी छल्ने बहानामा यहाँका युवतीहरू आफ्ना अर्धनग्न शरीर देखाउन उद्यत देखिन्छन्। वीरगञ्जका प्रत्येक चोक गल्लीमा हुलका हुल युवतीहरूका अर्धनग्न शरीर देख्न पाइन्छ। 'खत्तमै भयो नि सर,' स्कर्ट लाएर हिँड्दै गरेका एक हुल युवतीतिर इसारा गर्दै रिक्सा चालकले भने, 'बा-आमाले नि किन यस्तो छोटा कपडा लगाउन देका होलान्?''पहिले पहिले त यस्तो विरलै देखिन पाइन्थ्यो। सय जनामा मुस्किलले एक जनाले यस्तो पहिरन लगाउँदा सबै ट्वाल्ल परेर केहीबेर घोत्लिन्थे,' २० वर्षदेखि रिक्सा चलाएर गुजारा गर्दै आएका ४० वर्षीय श्रवन मियाले अनुभव सुनाए। छाडापन यति धेरै बढेको छ कि आफ्नो रिक्सामा बस्ने भर्खरका 'टिन' जोडीले बेलुकाको मौका छोपी रिक्सामै चुम्बन गर्दा चाल पाएर पनि नपाएको अभिनय गर्नुपर्ने उनले खुलाए। बिहारबाट २० वर्षअघि वीरगञ्ज आएर रिक्सा चलाउँदै आएका उनले पछिल्लो समयमा पश्चिमा फेसनको नाममा युवा पुस्तामा विकृति बढ्दै गएको बताए। यस्ता युवापुस्तालाई बेलैमा तह नलगाए भयानक विकृति फैलिने उनको कथन छ।रिक्सा चालकको भनाइलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँका फेसनेबल युवायुवतीसँग केही प्रतिक्रिया लिने विचार गरेँ। माइस्थानमा 'वन पिस'मा भेटिएकी रमिताले बढ्दो फेसनले यहाँका युवतीहरू कुर्ता-सरवालबाट स्कर्ट र वनपिसतिर आकर्षित बन्दै गएको बताइन्। 'गर्मी त बहानामात्र हो,' २० वर्षीया रमिताले भनिन्, 'पछिल्लो समयमा वीरगञ्जलाई पनि पश्चिमा फेसनले डोर्‍याउँदै लगेको छ।' उनी भन्छिन्, 'कुर्ता-सरवालसँग दुपट्टा भिर्ने दिन गइसके। यहाँका युवती पनि नयाँनयाँ फेसनको पर्खाइमा हुन्छन्।' छोराछोरीको फेसनप्रति बाबुआमा पनि केही पछि हटेको देखिन्छ। आदर्शनगरमा भेटिएकी पूजना लामाले बदलिँदो आधुनिकतासँगै हामी पनि बदलिनुपर्ने धारणा राखिन्। 'ट्रेडिसनल छु भन्दैमा स्कर्ट लाउन नहुने र आधुनिक छु भन्दैमा गुन्यु चोलो लाउन नहुने भन्ने छैन,' उनले भनिन्, 'बदलिँदो परिस्थितिसँगै हाम्रा धारणा बदल्नु जरुरी छ।' उनले समय र अवस्था हेरेर यी पहिरन लाउँदा कसैको केही नबिग्रने बताइन्।
फेसनले वीरगञ्जका युवतीलाई मात्र हैन, यहाँका युवालाई पनि उत्तिकै छोएको छ। 'ट्याटु खोप्नु, मुन्द्रा लाउनु त यहाँ सामान्य भइसक्यो,' स्नातक पढ्दै गरेका विशाल पोखरेलले भने, 'फेसनलाई फलो गर्नु, मोजमस्ती गर्नु, गर्लफ्रन्ड बनाएर डेट जानु यहाँ सामान्य भइसकेका छन्।' उनले ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बनाउने सजिलो माध्यम फेसबुक भएको बताए। विश्वप्रसिद्ध समाजिक सञ्जाल फेसबुक अहिलेका युवा पुस्तामाझ मनोरञ्जन गर्ने प्रमुख थलो बनेको छ। उनीहरू यही सञ्जालमा आएर साथी बनाउने, च्याट गर्ने र त्यही क्रमलाई ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको रूप दिने गर्छन्। मेनरोडको एक साइबरमा फेसबुक च्याटमा व्यस्त थिए राजीव थापा। उनी नयाँ-नयाँ साथी बनाउने र मोबाइल नम्बर दिन अभिरुचि राख्थे। यी १८ वर्षे युवालाई नम्बर तपार्इँले कि तपाईँको केटी साथीले माग्छन् भनेर सोध्दा उनले आफैंले मागे पनि उनीहरू सजिलै दिने गरेको बताए। उनले त्यसपछि मोबाइलमा कुरा गर्ने र भेटघाटको नाममा डेट गर्ने गरेको बताए। उनले आफ्ना साथीहरूले पनि यसरी नै फेसबुकमार्फत गर्लफ्रेन्ड बनाएको खुलाए। केटी मन परे त्यही बेला प्रपोज गर्ने र मन नपरे फेसबुकबाट डिलिट हान्ने चलन रहेको पनि राजीवले बताए।
साइबर सञ्चालक रमेश चौधरीले युवा पुस्तामा बढ्दै गएको विकृति खुलारूपमा हेर्न घडिहड्वा पोखरी जान सुझाव दिए। उनका अनुसार वीरगञ्जमा कहलिएको 'डेटिङ स्पट' हो, घडिहड्वा पोखरी। प्रत्येक युवा जोडीको पहिलो भेट हुने यो थलोमा वर्षैपिच्छे छठ पर्वसमेत मनाइन्छ।
त्यहाँबाट म घडीअर्वा पोखरीतिर रवाना भएँ। प्रवेश शुल्क तिरेर पोखरीभित्र प्रवेश गरेँ। काठमाडौँको रानीपोखरीजस्तै देखिने घडीअर्वा पोखरी अति नै सुन्दर रहेछ। रानीपोखरीको जस्तै पोखरीको बीचमा मन्दिर छ। यो पोखरी कसैको स्मृतिको लागि नभई पर्यटकका लागि निर्माण गरिएको घडीअर्वा पोखरी समितिका इन्चार्ज लखनलाल गुप्ताले बताए। उनले पोखरीमा भारतको बिहार तथा वीरगञ्जमै निर्माण हुने भोजपुरी फिल्मको प्रशस्तै सुटिङ हुने गरेको समेत बताए।
पोखरी घुम्ने क्रममा त्यहाँ प्रशस्तै युगल जोडी भेटिए। उनीहरूको हाउभाउ हेर्दा पोखरीको नाम घडीअर्वा नभई 'इश्क पोखरी' हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। पारिवारिक घुमघाम गर्न आएका कर्ण कुमारले पहिले यहाँ यस्ता युवा जोडी नदेखेको बताए। कुममा कुम मिलाएर बसेका एक जोडीसँग प्रतिक्रिया लिन खोजियो। उनीहरूले असहज मान्दै केही बोलेनन्। प्रत्येक १० मिटरको दूरीमा एक जोडी बसेको थियो। समितिका इन्चार्ज गुप्ताका अनुसार पोखरी प्रत्येक बिहान ४ बजेदेखि बेलुकाको ८ बजेसम्म खुल्ला हुन्छ। दैनिक सयौँ जोडीहरू आउने यस पोखरीमा कुनै जोडी बिहानदेखि बेलुकासम्मै बस्ने गरेको उनले बताए। 'बेलुका हुनुपर्छ, यहाँ कस्ता कस्ता दृष्य हेर्न पाइन्छन्,' गुप्ताले भने, 'हामीलाई लाज लाग्छ, तर उनीहरू लजाउँदैनन्।' नलेखेटेसम्म कतिपय जोडी जानै नमान्ने उनले बताए। बेलुका सिटी बजाउँदै सबै जोडीलाई बाहिर निक्लन आदेश दिने गरेको उनले बताए। यसरी 'सेटिङ' मिलाइन्छ विमानस्थलमा
सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, एकै दिन एउटै उडानमा २७/२७ जना मानिस अवैधानकि तरिकाले तस्करहरुको 'सेटिङ' मा टिआईबाट बिदेश उडेका छन्। टिआईएबाट बिदेश जाने र फर्कनेको जाँच तथा रेकर्ड राख्ने जिम्मेवारी पाई खटिएको अध्यायगमनसँग यसरी जानेको कुनै तथ्याङक छैन। अध्यायगमनका कर्मचारीले सेटिङमा जाने सबैको राहदानीमा डिपार्चर छाप लगाइदिन्छन् तर तीनको सुचना कम्प्युटरमा राख्दैन। सेटिङ्मा जानेलाई बिमानस्थल भित्र न 'गमन पत्र' भर्न नै लगाईन्छ न चेक जाँच नै गरिन्छ। गत जेठ ३१ गते तस्करहरुको सेटिङ्मा एउटै फ्लाईटमा २७ जना कतारको दोहा पुगेका थिए। यसरी अवैधानिक रुपमा जानेहरु अधिकांस दोहाबाट अमेरिका जाने सपना सजाई ब्राजिल तर्फ मोडिए, केही युरोपतिर त कोही कतारमा नै बसे।
ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलबाट बोलिभिया, पेरु, इक्वेडर, कोलम्बिया, पानामा, कोस्टारिका, निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिकोहुदै अमेरिका जान हिडी ब्राजिलमा अलपत्र पर्नेमध्ये सात जना काठमाडौं फर्केपछि टिआईएमा हुने गरेको सेटिङ बाहिर आएको हो। अमेरिका छिर्ने आशमा तस्करलाई २२ लाखसम्म बुझाएका उनीहरुले टिआईए छोडेको तथ्याङ्क अध्यायगमनसँग छैन। 'हाम्रो तथ्याङ्कमा गत जेठ ३१ गते १ सय २८ जना काठमाडौंबाट दोहा उडेका छन्,' जेठ ३१ गते टिआईबाट दोहा उडेको तथ्याङ देखाउँदै कतार एयरवेज स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'तर, हाम्रो विमानमा दोहा उडेका २७ जनाको सूचना अध्यायगमनले राखेको तथ्याङ्कमा भेटिदैन।' ब्राजिल पुगी अलपत्र परी भदौ १० गते काठमाडौं फर्केका सात जनाको तथ्याङ अध्यायगमनसँग छैन, जो जेठ ३१ गते नै दोहाहुँदै ब्राजिल पुगेका थिए।
जेठ ३१ गते राती ११ः३५ बजे कतार एयरवेजकको 'क्युआर ३५५' विमान कूल १ सय २८ जना यात्रु बोकी दोहा तर्फ उडेको थियो। कूल यात्रु मध्ये ७८ जना नेपाली र ५० जना बिदेशी यात्रु विमान रहेका थिए। कतार एयरवेजमा दोहा पुगेका ७८ जना नेपालीमध्ये २७ जना सेटिङमा गएका थिए, जसको राहदानीमा अध्यायगमनका कर्मचारीले डिपार्चर छाप लगाई त्यसको तथ्याङ्क राखेका थिएनन्। सेटिङमा जेठ ३१ गते राती अमेरिका जान हिडेका तर ब्राजिलमै अलपत्र परी काठमाडौं फर्केका मध्ये पाँच जनाको जहाजको टिकट नम्बर क्रमसः १५७५०६८५९८०७५, १५७५०६८५९८०७६, १५७५०६८५९८०७७, १५७५०६८५९८०७८ र १५७५०६८५९८०८१ रहेको छ। उनीहरु पाँच जनामध्ये एक जनाको राहदानी लगाइएको डिपार्चर स्टिकरको सिरियल नम्बर ५९६९९६० रहेको छ। फर्कनेहरुको अनुसार अध्यायगमनका दुई वटा काउन्टरबाट चेकजाँच पास भई विमानसम्म पुगेका थिए। ब्राजिलहुँदै अमेरिका जान लागेका बताएपछि अध्यायगमनका कर्मचारीले टेबुल मुनिबाट एउटा कागज झिकी त्यहाँ रहेको नाम र राहदानी उल्लेख नाम जुधाइ हेरेका थिए। नाम मिलेपछि अध्यायगमनका कर्मचारीले उनीलाई भित्र छिराएको ब्राजिल पुगेर फर्कनेले बताए।
अध्यायगमन बिभाग स्रोतका अनुसार जेठ ३१ गते सेटिङमा २७ जना टिआईएबाट दोहा जाँदा अध्यायगमनमा ११ जना वरिष्ठ अध्यायगमन सहायक त्यहाँ कार्यरत थिए। त्यतीबेला वरिष्ठ अध्यायगमन सहायकहरु कृष्णप्रसाद दाहाल, राजेन्द्र शर्मा, धर्मराज काफ्ले, गणेशप्रसाद घिमिरे, लक्ष्मण दूलाल, सूर्यकुमार पोखरेल, नवराज कोइराल, अनिल कुमार शाही, ओमप्रसाद सुवेदी, महेश पोखरेल र रामकुमार ओझाको ड्युटी रहेको स्रोतले बतायो। सेटिङमा ब्राजिल पुगी फकर्नहरुको अनुसार उनीहरुलाई टिआईमा सघाउने दुई वटा काउन्टरमा रहेका अध्यायगमनका दुई जना कर्मचारी थिए।
सेटिङमा ब्राजिल जानेको दोहामा ६ घण्टा ट्रान्जिट रहेको थियो। त्यसपछि उनीहरु सेटिङमै दोहाबाट 'कतार एयरवेज - ९२१' विमानमा १४ घण्टा लामो यात्रा गरी जेठ ३२ गते ब्राजिलको साओपाओलो पुगेका थिए। काठमाडौंबाट उड्दा उनीहरुसँग खाली राहदानी र साओपाओलोसम्मको मात्र हवाई टिकट हातमा थियो। साओपाओलो विमानस्थलमा २२ घण्टा ट्रान्जिटमा बिताएपछि असार १ गते ब्राजिलियन एजेन्टले उनीहरुलाई बोलिभियाको सान्तात्रु्कज र सान्तात्रु्कजबाट लापाजसम्मको हवाई टिकट थमाएका थिए। साओपाओलोबाट दुई घण्टामा सान्तात्रु्कज पुगी उनीहरुले बोलिभियाको भिसा लगाए लगत्तै डेढ घण्टाको हवाइ यात्रापछि उनीहरु लापाज पुगेका थिए। लापाजमा ब्राजिलको भिसा लगाएपछि उनीहरु ५१ घण्टा बस यात्र गरी साउन ७ गते पुनः साओपाओले पुगेका थिए। साओपाओलोमा अलपत्र छोडी दलाल भागेपछि काठमाडौंमा रहेका आफन्तलाई फोन गरी हवाइ टिकटको व्वस्था मिलाई उनीहरु भदौ १० गते काठमाडौं आइपुगेका हुन्। उनीहरु काठमाडौं आइपुगेपछि अध्यायगमनका कर्मचारी नै सेटिङमा सक्रिय रहेको खुलेको हो। यसरी सेटिङमा अमेरिका जान भनि हिडेका हजारभन्दा बढि नेपालीहरु अहिले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिल, बोलिभिया, चिली, कोस्टारिका लगायतका देशमा अलपत्र छन्।
source:nagarik परीक्षामा फेल भएपछि आत्महत्या
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ६ इनारपाटीकी १८ वर्षकी बिनीकुमारी कुमालले पनि घरमै झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छन् । तीनवटै मृत्युका घटनाबारे अनुसन्धान भईरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी निरिक्षक प्रल्हाद अधिकारीले बताउनुभएको छ । कक्षामा निद्रा
बढ्दो गर्मीमा जस्ताको छानोको तापले आकुलव्याकुल भई कक्षाकोठामा निदाइरहेका इटहरीका साना विद्यार्थीहरु । भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्व सहसचिव खनाल का
२० प्रतिशत कैद र जरिवाना छुट- काठमाडौँ, भदौ २१- सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव आनन्दप्रसाद खनाल आज आफैं काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जरिवाना र बिगोबमोजिमको रकम बुझाई कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजारस्थित सदर खोर गएका छन्।
यो फैसलाविरुद्ध दुबैतर्फबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो। रासस View More
Top Bloggers	Admin 55 blog(s)